Torohevitra 10 momba ny famolavolana tranokala misy trano ahafahan'ny mpividy sy mpivarotra mety hirotsaka | Martech Zone
Alahady, Desambra 13, 2020 Alahady, Desambra 13, 2020 Sumiya Sha
Ny fividianana trano, trano, na condo dia fampiasam-bola lehibe… ary matetika indray mandeha amin'ny fiainana iray no mitranga. Ny fanapahan-kevitry ny fividianana trano dia atosiky ny fihetseham-po mifanohitra indraindray - ka betsaka ny zavatra tokony hodinihina rehefa mamolavola trano tranokalan'ny trano sy tany izay manampy azy ireo mandritra ny dia mividy.
Ny anjaranao, amin'ny maha agents anao na brokeranao, dia ny mahatakatra ny fihetsem-po eo am-pitantanana azy ireo mankany amin'ny safidy misaina sy mahay. Ireto misy torohevitra enina mamolavola sy manatsara ny tranonkalanao izay hanampy anao ho lasa mpitarika dizitaly amin'ny varotra trano.
Soso-kevitra 1: ampidiro ny fahafaha-manao fikarohana sy sivana anatiny
Rehefa miantsena hividy trano ny fanantenanao dia manana fepetra manokana foana izy ireo ao an-tsaina. Raha vantany vao tonga eo amin'ny tranokalanao ny mpitsidika dia asehoy azy ireo fa afaka mikendry ny filan'izy ireo sy ny fananana mifanentana amin'izay tadiaviny ianao.
Ampidiro ny fametrahana mazava ho azy ny saha fikarohana anatiny miaraka amin'ny sivana izay hahafahanao mampisaraka ny fanananao. Raha mifantoka amin'ny fividianana trano ny hetsika ataonao, ohatra, dia ampidiro ny vidiny, ny karazana firafitra, ny sary an-tsary toradroa, ny haben'ny haben'ny, ny isan'ireo efitrano fandriana, ny isan'ireo trano fandroana, ary ireo toetra hafa (fatana, dobo, garazy, sns.).
Raha toa ka ahitana faritra maro, karazan-tany ary karazan-drafitra maro ny lisitra nataonao dia azonao atao ny manitatra ny fahafaha-manivana hahafahan'ny mpividy manaparitaka ny fikarohany any amin'ireo faritra manodidina sy toetra mampiavaka ilay trano.
Soso-kevitra 2: Manokana pejy iray isaky ny faritra
Ilaina ny safidin'ny manodidina raha hividy trano. Manokana pejy iray isaky ny faritra, manodidina, na distrikan'ny sekoly izay anoloranao ny varotra na fanofana trano na trano. Ampidiro fampahafantarana azo ampiharina sy ilaina ho fantatra momba ny faritra. Ary asio sarintany izay mampiseho tsara ny fanananao tsirairay miaraka amin'ny toerana mahaliana hafa:
Serivisy akaiky (sekoly, fivarotana, toeram-pitsaboana, hopitaly, fiangonana)
Fialam-boly (zaridaina, dobo filomanosana, taranja golf)
Toeram-pizahantany eo akaiky eo
Ampitao hatrany ny fomba fiainana hita eo amin'ny manodidina anao. Toerana mangina sy azo antoka ve izany, mety ho an'ny fianakaviana tanora, sa ny manodidina ny fironana eo akaikin'ny trano fisakafoanana, sinema ary efitrano fampisehoana tsara indrindra? Ho fanampin'ny fampahalalana amin'ireo mpitsidika anao ny toerana tsy ho fantany, ireo pejy ireo dia hanatsara ny fanoratana ny pejinao ho an'ny karoka manokana.
Soso-kevitra 3: Omeo ny antsipiriany rehetra amin'ny fananana tsirairay
Ny mpividy an-tserasera anio dia tsy te-hiantso mpandraharaha na mpivarotra trano mba hahazoana fampahalalana lehibe. Hamarino tsara fa ireto pejy ireto izay manome antsipiriany momba ny fanananao na ny singa misy anao:
Ny isan'ny efitrano, ao anatin'izany ny efitrano fandriana sy ny fandroana
Ireo sary an-kianja, ny toerana onenana sy ny faritra amin'ny efitrano (metric sy imperial)
Rafitra herinaratra, fanafanana ary rano
Fonenana ivelan'ny trano (lavarangana, biriky, sns.)
Toerana sy serivisy mahazatra atolotra (raha ny trano fandraisam-bahiny)
Fanaka na kojakoja fanaka izay ho tafiditra ao
Taona fanamboarana na fanatsarana natao arakaraka ny fotoana
Fahafahana fanarenana vaovao (oh: fanavaozana ny lakaly)
Ary, mazava ho azy, asio sary mahatalanjona isaky ny lafiny fananana, ivelan'ny trano isaky ny zoro, sary isaky ny efitrano, ary na dia rakitsary drone an'ny trano aza. Raha sarina teny an'arivony ny sary iray dia alao sary an-tsaina ny fiantraikan'ny sary tsara tarehy am-polony maro! Tsy mila manakarama mpaka sary matihanina ianao… Ny smartphone maoderina dia manana fahaiza-manao mahavariana ankehitriny. Miaraka amin'ny zoro sy jiro mety, azonao atao ny manana sary faran'izay tsara izay misambotra ny antsipirian'ny trano rehetra.
Soso-kevitra 4: Omeo fomba iray hizarana ilay fananana
Ireo mpividy trano ankehitriny dia mahalana ny miantsena irery, koa manolora safidy maromaro hizarana amin'ny mailaka, media sosialy, na amin'ny alàlan'ny hafatra an-tsoratra. Azonao atao mihitsy aza ny manolotra endrika "Alefaso any amin'ny namana na mpiara-miasa iray" izay misambotra ny adiresy mailaka sy ny lisitry ny antoko liana - mitandrema fotsiny hametraka ny fanantenana raha hifandray amin'izy ireo ianao na tsia.
Aza hadino koa ny mametraka ny rohy rehetra mba hahalalanao izay serivisy media sosialy no mitondra ny ankamaroan'ny fizarana sy fitsidihana ny tranonao.
Soso-kevitra 5: Ataovy maimaim-poana, tsy miankina amin'ny tsindry, ny fifandraisana aminao
Matetika ny mpividy no misalasala manatratra ny maso sy ny brokers, dia tianao ny hampitony azy ireo bebe kokoa. Na dia ampidirina ao aza ny anarana sy ny nomeraon-telefaona an'ny masoivohonao dia aza hadino ny mampiditra sary iray miaraka amin'ny hafatra manokana fa tsy hisy faneriterena ny fanontaniany.
Aza hadino ny mampiditra takelaka isaky ny pejy fananana miaraka amin'ny fampahalalana momba ny fananana ao anaty sehatra miafina. Amin'izany fomba izany, rehefa manatona azy ireo ianao dia afaka mikaroka ilay trano ary miomana amin'ny resaka!
Soso-kevitra 6: sambory ny Analytics ary araho ny angona mpitsidika anao
Na mpilalao kely ianao na mpilalao lehibe eo amin'ny sehatry ny trano sy trano, dia tsy isalasalana fa handray soa ianao amin'ny fanangonana vaovao momba ireo mpitsidika anao. Ity ampahany amin'ny paikadin'ny varotrao ity dia mety hanana lanjany miovaova, miankina amin'ny teti-bola sy ny loharanon'olombelona anananao. Fitaovana fitantanana firaka maro no mety tena ilaina amin'ity sehatra ity.
Fomba fisamborana firaka
Manomboha manangona vaovao momba ireo mpitsidika anao amin'ny alàlan'ny fandresen-dahatra azy ireo fa ny fanomezana ny adiresy mailaka dia hahasoa ny fikarohan'izy ireo trano. Ireto misy ohatra vitsivitsy amin'ny paikady mahomby amin'ny fakana ny mombamomba ny prospect amin'ny indostrian'ny trano sy tany:
Varavarana malalaka sy fitsidihana tsy miankina
Fifaninanana na fanentanana
Lisitra VIP ho an'ny tolotra manokana momba ny tany (ohatra ny vidiny)
Torohevitra sy torohevitra momba ny trano sy tany
Fanambarana fananana vaovao
Apetraho ho toy ny popup bokotra, slide-ins, na apetraho ao amin'ny footer an'ny pejy tsirairay ireo takelakao.
Na izany na tsy izany, mifantoha amin'ny tanjonao voalohany: fanangonana vaovao amin'ny mpanjifa mety. Halaviro ny fifaninanana na fampiroboroboana manjavozavo loatra izay tsy misy ifandraisany amin'ny vokatra amidinao, raha tsy izany dia azonao atao ny mamporisika ireo mpitsidika tsy mahay misoratra anarana. Ny fanamby hisamborana ireo mety ho mpividy nefa manavakavaka ireo mpitsidika izay tsy liana amin'ny fanananao.
Pejy fitobiana azo zahana
Raha mampiasa vola amin'ny doka sy marketing ianao, aza diso ny fitantanana ny fivezivezenao amin'ny pejin-tranonkalanao. Mamorona pejy fipetrahana manokana ho an'ny loharanom-pahalalana tsirairay - na fanaovana dokam-barotra eo an-toerana, na takelaka, na hafatra mailaka Amin'ny alàlan'ny famoronana sy fanaovana personal a pejy fiantsonana isaky ny salantsalany na fantsona, tsy hoe ho afaka hanara-maso ny fahombiazan'ny varotrao fotsiny ianao, fa azonao atao manokana koa ny mandefa hafatra any.
Ny pejy fandraisana tsirairay dia tokony hanana tanjona tokana. Ny mpampiasa tonga amin'ity pejy ity dia tokony ho afaka hahatakatra ny tolotra omenao afaka segondra vitsy ary heveriny fa mahaliana ampy izany hamenoana takelaka iray miaraka amin'ny mombamomba azy manokana.
Ireto misy fotoana mety tsara amin'ny pejy fitobiana:
Fanambarana trano sy tany vaovao
Andro misokatra na famandrihana fitsidihana manokana
Misintona torolàlana momba ny fividianana trano
Fanontaniana iray hanampy amin'ny fividianana trano
Tolotra fampiroboroboana amin'ny trano fantsona sasany
Soso-kevitra 7: Volavola ho an'ny fitaovana finday aloha
Raha manome birao sy trano an-taonina (volavola pun) ny birao mba hanehoana fampahalalana kanto, ny fananganana traikefa ho an'ny mpampiasa amin'ny fitaovana finday iray izay tsotra sy tsotra dia mety ho fanamby. Na mamolavola pejin-karoka izay sarotra na a fitsidihana trano sy tany finday izay ahafahan'ny mpampiasa manao sary ny sarin'ny trano iray, ny famolavolana finday dia ho zava-dehibe amin'ny fiantraikan'ny famolavolana tranokalanao.
Mandania fotoana amin'ny fampiasana ny tranokalanao amin'ny fitaovana finday ary mangataha valiny avy amin'ny namana sy mpiara-miasa aminao momba ny fomba mora ampiasan'ny tranokalanao. Ianao koa dia te-hizara ny fikarohana findainao, ny fivezivezin'ny mpitsidika ary ny angon-drakitra azonao amin'ny alàlan'ny fitsidihana finday mba hiantohana ny fisian'ny mpampiasa sy mahasarika.
Raha manamboatra finday aloha ianao dia aza gaga rehefa mahita ny fiakarana amin'ny fahitana ny motera fikarohana ary mitombo ny isan'ny mpividy! Mobile dia manakiana ny tranonkala rehetra amin'ny indostrian'ny trano sy tany!
Soso-kevitra 8: Manomboha bilaogin'ny trano sy tany
Ny bilaogy dia fotoana mety hifaneraserana amin'ireo mety ho mpividy. Ny fizarana tantara manokana, torohevitra momba ny fividianana trano, orinasam-paritra ankafizinao, fanokafana trano fisakafoanana vaovao, sekoly ary fampahalalana momba ny hetra eo an-toerana… dia manangana ny fahefana sy ny fifandraisanao amin'ireo mpifanoratra aminao. Na dia mety tsy mbola nifanena tamin'izy ireo aza ianao, ny bilaogy dia manome ny fotoana hahafahan'izy ireo hahafantatra anao amin'ny maha-mpitarika azy ireo izay azony itokisana ao anatin'ny fiarahamonina amidinao.
Ankoatra ny varotra, ny anjara asanao amin'ny maha mpanolotsaina anao dia tena ilaina amin'ny fifandraisan'ny orinasanao amin'ny mpanjifanao. Zava-dehibe ny fividianana trano, koa manankery tokoa ny fahefan'ny fananganana toy ny maso ivoho sy fananana atokisan'ny mpitsidika anao.
Ny fitazonana bilaogy dia fomba tsara hitazomana ny mpanjifa koa. Raha manome torohevitra momba ny fananan-trano, ny fikojakojana, ny fanavaozana ary ny fampitomboana ny sandan'ny fananan'izy ireo ianao - ny mpividy dia hampahatsiaro anao raha toa ka nifindra toerana izy ireo ary mila mivarotra, na niova ny fianakaviany ary tokony hifindra izy ireo fananana mety kokoa.
Ireo lohahevitra azonao ampiasaina amin'ny bilaoginao dia tsy misy farany. Ireto misy ohatra vitsivitsy:
Mividy trano (fepetra, safidy, safidy, famatsiam-bola)
Famindran-toerana sy fivezivezena
Fiovan'ny tsenan'ny trano sy tany
Fitsaboana ara-dalàna (antontan-taratasy, antoka, kilema miafina)
Fanamboarana ny fonenana
Torohevitra momba ny vanim-potoana (zaridaina, fikojakojana sns.)
Soso-kevitra 9: Manomboha Gazety iray
Nifanakalo hevitra momba ny hevitra famandrihana vitsivitsy etsy ambony izahay ho an'ny takelaka fisamborana anao, fa ny lanjan'ny gazety dia tsy azo hamaivanina. Alao sary an-tsaina ny bilaoginao ho fitaovana hanosehana ny tranokalanao ho amin'ny mpividy na mpanjifanao mety… manome azy ireo torohevitra sarobidy, loharanom-paritra, ary manohy mametraka fahatokisana sy fahatokisana amin'izy ireo. Raha mpividy izany dia mety hahita ny trano tadiaviny izy ireo amin'ny farany. Raha mpanjifa izany dia hanohy hihazona fifandraisana amin'izy ireo ianao ka rehefa vonona ny hivarotra izy ireo dia ianao no mpandraharaha izay ao an-tsaina indrindra!
Fanamarihana: Ny gazety iray dia tsy tokony ho enta-mavesatra! Ny tranokala maoderina dia manana feed syndication izay azo ovaina endrika, voalahatra ary avoaka amin'ny sehatra mailaka nefa tsy mila mikasika bokotra akory ianao! Miresaha amin'ny ekipa mpamorona tranokalanao momba ny fomba fampidirana RSS amin'ny fahafaha-mailaka.
Soso-kevitra 10: hampiroborobo ny tranokalanao sy ny bilaoginao… Na aiza na aiza!
Ampidiro ny URL-n'ny tranokalano amin'ny karatra fandraharahana, flyer, antontan-taratasy, sonia mailaka, sonia ary zavatra hafa rehetra ataonao. Ny mpividy anio dia tia manompo tena ary mampiasa ny tranonkala hikarohana sy handray fanapahan-kevitra momba ny fividianana. Rehefa mihaona imasom-bahoaka ianao ny mpividy, ny mpivarotra, ny matihanina amin'ny indostria, ary ny tompona orinasa isam-paritra, manontania raha azonao atao ny manoratra azy ireo amin'ny mailakao. Mety ho gaga ianao amin'ny isan'ny referraly sy fizarana izay ho vokarin'ny atiny aorian'ny volana vitsivitsy.
Amin'ireto torohevitra ireto dia ampy fitaovana ianao mba hampitomboana ny fiantraikan'ny tetikasan'ny trano sy tranokala amin'ny Internet!
Tags: fivarotana findayfitsidihana findayvarotra sy hofa fananana mifakapejy fitobiana trano sy tanyvarotra tranofinday findaygazety momba ny trano sy tanytranokalafamolavolana tranokalatranokalan'ny trano sy tany
Sumiya no mpanoratra ny tranonkala Media Xploited. Amin'ny maha mpanoratra an-tsoratra azy dia nanandrana namorona endrika tranonkala maro i Sumiya ary manantena ny hizara izany amin'ireo mpamaky azy.